काठमडौंको सुन्धारा मदनी मस्जिदमा भू-माफियाद्वारा तोडफोड गर्ने प्रयास
एम. डी. मोजिबुल्लाह , रौतहट , २०७८ वैशाख ६, साेमबार,११:३८:AM
काठमडौं, ०६ वैशाख। काठमडौंको सुन्धारा स्थित रहेको मदनी जामा मस्जिदमा आइतबारका दिन केही भूमाफियाहरुद्वारा मस्जिद लाई पुन: तोड फोड गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसरी कुनै धार्मिक स्थललाई क्षती पुर्‍याउनु ठूलो मूर्खता साबित भएको मुस्लिम अगुवाहरूको भनाइछ ।
गत वर्ष २०७७ कात्तिक ८ शनिवारको दिन पनि यो घटना भू-माफियहरुद्वारा उस्तै घटना घटाइएको थियो। त्यसबेला मस्जिदलाई डोजर लाएर भत्काइएको पनि थियो। मस्जिद भत्काइएपछि काठमाण्डौंमा रहेका मुस्लिम समुदाय चिन्तित र आक्रोशित बनेका थिए। सोही घटनामा पुन: घटेको कारणले देशभरका मुस्लिम समुदाय दुःखित भएका छन् ।
एक सय वर्षभन्दा पुरानो यो मस्जिदमा भू-माफियाको तारो समेत बन्ने गरेको छ । निर्माणाधीन धरहराको ठिक पछाडि ६ आना ३ दाम क्षेत्रफलमा रहेको यो मस्जिदको स्वामित्व नेपाल सरकारसँग रहेको छ भने भोगचलन मस्जिद व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ ।
यो घटनाको मुस्लिम आयोगले समेत विरोध गरेको छ । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया पनि घटना स्थलमा पुगेर निन्दा गरेका छन्। मियाको अनुसार भू-माफियाहरुले जग्गा हडप्न मस्जिद भत्काउने काम गरेको बताएका छन्। यसअघि पनि पटक–पटक भू-माफियाले जग्गामा आँखा लगाएर मस्जिदमा रहेका नमाजीहरुलाई धम्क्याउँदै आएको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो ।
यो मुसाफिर मदिनी मस्जिद २०७२ सालको भूकम्पले धरहरा ढल्दा क्षतिग्रस्त बनेको थियो । यसलाई मुस्लिम समुदायले अस्थायी रुपमा संरचना बनाइ प्रयोग गरिरहेका छन् ।